Maxay Diinta Islaamku Ka Qabtaa Gaalaysiinta Muslinka? Faallada Khudbad Uu Sheekh Saleebaan Ku Duray Ibraahin-Hawd Yuusuf Hawd! Waxa Qoray: Siciid Maxamuud Gahayr (Hargeysaawi) ..July 15.18 | Salaan Media
Maxay Diinta Islaamku Ka Qabtaa Gaalaysiinta Muslinka? Faallada Khudbad Uu Sheekh Saleebaan Ku Duray Ibraahin-Hawd Yuusuf Hawd! Waxa Qoray: Siciid Maxamuud Gahayr (Hargeysaawi) ..July 15.18
July 15, 2018 | Published by: Hamse
Maxay Diinta Islaamku Ka Qabtaa Gaalaysiinta Muslinka? Faallada Khudbad Uu Sheekh Saleebaan Ku Duray Ibraahin-Hawd Yuusuf Hawd! Waxa Qoray: Siciid Maxamuud Gahayr (Hargeysaawi)
Waxa ay shalay maalin Hakis-bila (Jimce) ah 13kii Julaay 2018ka markii aan baraha bulshada ku arkay nin la yidhaahdo Sheekh Saleebaan Siciid Cali oo khudbad ka jeediyay masaajid ku yaalla Berbera. Kaas oo uu ku beegsaday Qalinleyda, afka Soomaaliga, xarumo Hargeysa ku yaalla iyo weerar qaawan oo uu ku qaaday Ibraahin Yuusuf Axmed (Ibraahin-Hawd).
Waxa aan faalladan ku naqdiyi laba ka mid ah eedahaas uu jeediyay ninkaas la yidhaahdo Saleebaan Siciid Cali. Saleebaan waxa uu xukuumaddii Siilaanyo ka qabtay xilal ay ka mid yihiin Isu-duwaha Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta ee Gobolka Saaxil, Maareeyaha Haamaha Shidaalka Berbera iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Somaliland. Qoraal laga sameeyay dhacdadaas oo uu faafiyay goobjooge bogga Facebook ku soo gala Ahmed Zakir ayaa u dhignaa sidan: “Ibraahin Hawd ma gaal baa? Masjidka ayaan galay isaga oo mobilkiisa gacanta qoraal ku qoran dadka hortiisa ka akhrinaya nin la yidhaahdo Saleebaan Siciid Cali. Haa waan hubaa in khudbaddu mobilka ku qornayd waayo sida uu higaadda afka Carbeed u qalad saxayo ayaan uga tusaale qaatay. Intuu fadhiistay ayuu haddana kacay oo Soomaali ku hadlay wuxu sheegay in ay xaaraan tahay in dib loo soo nooleeyo dhaqanka Soomaalidu asal ka u lahayd.
Wuxu sheegay in dumarkii hore dharkay xidhan jireen naasuhu muuqan jireen. Wuxu aad u dhaliilay xarunta Hiddadhawr, dhallinta hal-abuurka ah iyo buugta afka Soomaaliga ku qoran ayuu ku tilmaamayin ay bilaa nuxur yihiin. Hal buug oo uu akhriyay ama gorfeeyayna kumuu xusin hadalkiisa. Iguma cusba nin manhaj Carbeed wax ku bartay oo collaystay afka soomaaliga iyo dhaqankiisa. Waxase layaab ah nin uu meesha kaga dhawaaqay in uu gaal yahay “Ibraahin Hawd ninka la yidhaahdaa diinta Kiristanka ayuu faafiyaa nacdasha Alle korkiisa ha ahaatee, ninkaas qoraallada uu qoro waan akhriyay wuxu wax ku qoraa afkii hore ee reer miyigu ku hadli jiray”. Bal u fiirso hadalkaa waliba wuxu intaa raaciyay ninkaasi Europe ayuu joogaa. Waxaanu uga fadhinnay in uu caddaymo waafiya ka bixiyo goorta uu gaaloobay, sida uu u gaaloobay iyo cidda uu gaalaysiiyay illaa hadda. Qoraal kaliya xitaa sharraxaad kama uu bixin.
Haddii uu maanta ninka uu sheegay in uu Europe joogo diinta ka saaray intayadii horfadhidayna Jimcaha danbe ayuu naga saarayaa! Goormuu awood u yeeshay in qofka uu doono diinta ka saaro?. Waa jariimad weyn.Miyaanu ogayn in uu garaadkooda caayay oo aanu teello u dhigan dadkuu la hadlayay? Miyaanu ogayn heerka ay ka taagan-tahay Diinta Islaamka ee uu sida khaldan ugu macaashay in qof islaam ah gaal lagu sheego” Saleebaan Siciid Cali oo aanan hubin in la siin karo kaalinta “Sheekh” iyo aqoontiisa diineed waxa uu diinta Islaamka ka saaray Ibraahin Yuusuf Axmed (Ibraahin-Hawd) oo ka mid ah qoreyaasha Soomaalida ee caanka ah. Ma arkin waxa uu xujadiisa u cuskaday, wax fududna uma arko in qof laga saaro diinta Islaamka. Inta aan ogahayna, Ibraahin-Hawd sannadkan ma faafin qoraallo lid ku ah diinta Islaamka oo la faalleeyo, laga warceliyo ama ay tahay in lagu duro. Qof ahaan ma oggoli cid wax ka sheegta diinta Islaamka, sidoo kale ma fiicna in lagu talax-tago ka warcelinta aragtida/hadalka la dhibsado. Diinta Islaamku waa nasteexo, waxa habboon in la toosiyo qofka loo arko in uu qallooc ku socdo. Diinta Islaamku ma aha qol laga saari karo ciddii la qoonsado. Xilligii Nebi Maxamed SCW waxa dhacday in nin asxaabi ah uu dilay gaal ay dagaal ku jireen oo ashahaatay markii seefta madaxiisa la saaray.
Wuxuu asxaabigani u qaatay in uu ku dhuumanayo ama dilka kaga fakanayo weedha Islaamnida ee uu ku dhawaaqay. Nebi Maxamed wuxuu yidhi “Maxaad samayn marka ay kelmaddi timaaddo maalinta qiyaame?”. Imaka muxuu odhan Saleebaan haddii uu arko Ibraahin-Hawd oo muslin ah maalinta qiyaame? Miyaanu isagu gelaynnin halka uu walaalkii u quudhay? Saleebaan Siciid Cali: 1. Waa masuulkii ka dambeeyay in uu Masaajidka Sheekh Isaxaaq ee ku yaalla magaalada Berbera uu xidhnaado muddada ku dhaw labada gu’ 2. Sannadkii 2016ka waxa magaalada Berbera lagu qabtay booyad uu leeyahay oo khamri sidda. Sheekh Saleebaan waxa uu fool-xumadan dusha u saaray wadihii baabuurka. 3. Maamul-xumadiisu waxa ay sabab u ahayd in Haamaha Shidaalka ee Berbera lagu wareejiyo dad shacab ah 4. Waxa uu ka mid ahaa dadka mansabyada ku helay guul-wadeynta ee aan lagu xulannin aqoon, karti iyo astaan uu mudnaan uu leeyahay. Weerarka qaawan ee uu Ibraahin-Hawd ku qaaday waxa aan u arkaa mid jawaab u ah naqdiga uu Ibraahin ku sameeyo xukuumadda Somaliland. Haddii uu qof mucaaridka taageero, waxa habboon in aan lagala bixin xaydaabka xisbiyada Somaliland.
Qof ahaan waan cambaaraynayaa eeddaas qaawan ee uu hubsiimo la’aanta ku jeediyay. Malaha wuxuu moodayaa in kuraasida lagu bixinayo gaalaysiin, waxa ka lumay hal-beeggii xil-raadinta. Waxa aan leeyahay Saleebaanow halkaas ku noqo, waxa fiican inaad jid kale u marto xaqiijinta damacaaga. Dhanka kale, waxa uu ninkani wax aan macne lahayn ku sheegay dhiganeyaasha Soomaalida ee ay qoraan qalinleydu. Waxa uu u muuqanayaa nin hinaase hayo. Hore ayaa loo yidhi “Baqashu ma dhasho, wax dhalana ma jecla”. Ma geyno in la daadifeeyo waxqabadka aanu fulinnay. Hore ayaan awyada ugu jeediyay in ay bartaan qoraalka, akhriska iyo adeegsiga afka Soomaalida. Ugu dambayntii waxa aan culimada Somaliland weydiinayaa: 1. Miyaad la qabtaan Sheekh Saleebaan Siciid Cali in si fudud qof muslin ah loogu sheego gaal? 2. Ma habboontahay in aad qabataan qofkaas sida gurracan u hadlay ee sita summadda iyo magaca culimada? Siciid Maxamuud Gahayr (Hargeysaawi)